Zulu | Boxing Products Supplier
Umthengisi Imikhiqizo Umkhiqizi ngumkhiqizi futhi uNgaphandle kwezinto eziphezulu ze-Boxing Equipment, ama-Glove Gloves, ama-Hand Wraps, Izinsiza zokulwa nokulwa, ama-Uniformms wokulwa, ama-Rash Guard, ama-MMA Shorts, ama-Karate Mitts, ama-Fitness ama-Fitness, i-MMA Equipment, nokunye okunempumelelo unyaka wobulungu be-alibaba zegolide. Ububanzi bomugqa wethu womkhiqizo, ikhwalithi enhle, namanani okuncintisana asenzele enye yezinkampani ezinokwethenjelwa zalolu hlobo ePakistan. Konke lokhu kwenzeka ngenxa yethimba lochwepheshe kakhulu lisebenza kuyo yonke iminyango ye-Boxing Products Supplier futhi yingakho sinobuhlobo obuseduze bokusebenzisana namakhasimende ethu angaphandle emhlabeni wonke ukuze baqonde futhi bagcwalise izidingo zabo / izidingo noma nini nanoma yisiphi isikhathi.
Umthengisi Imikhiqizo Umthengisi wamukeleka njalo ukwenza ngokwezifiso izitayela zethu zomkhiqizo, Okuqukethwe nganoma iyiphi i-logo edingekayo noma igama lomkhiqizo. Siyakwamukela futhi abathengi / abathumeli abafisa ukhiqiza imiklamo / izitayela zabo zenkampani ezihlukene ezivela kithi.
Izinto ezisetshenziselwa ukukhiqizwa ziyikhwalithi enhle kunazo zonke ngokuvumelana nemfuneko yamakhasimende, futhi lezi zinto zithengisa kahle, umthengisi wethu umkhumbi ukhulu kakhulu olawulwa ngaphansi kokuqondisa okuqinile kuzo zonke izigaba zokukhiqiza. Sigxila ekuhambisweni okusheshayo nokuhleliwe kokuthunyelwa ukuze sigweme noma yiluphi uhlobo lokulibazisa kwinkqubo yokuthumela.
Imigqa yethu emine yomkhiqizo emikhulu inokujula okukhulu kubo okungabonwa kalula ngokusebenzisa ikhathalogu yethu ye-intanethi.
Izinsiza zebhokisi: - Amagundane emabhokisini, ama-Gloves Bag, ama-Bag Mitts, ama-punching Mitts, ama-Mitts Focus, ama-Punching Bags, ama-Speed ​​Balls, abaPhathi bezinhloko, abagcini bamabhokisi, ama-Groin Guards, ama-Boxing wears, ama-Shooting Shorts, abagcini be-Shin nama-Shorts ama-Thai.
Imishini ye-MMA: - Ama-uniform Arts, ama-Rash Guard nama-Tank Tops, ama-MMA ama-Shorts, ama-Kick Boxing, ama-PMA ama-Gloves, ama-Pads ase-Thai, ama-Vale Tudo Shorts, ama-Kick Shields, ama-Karate Mitts, ama-Karate amabhande, ama-MMA Spats nokuvikelwa.
Ukugqoka Ukugqoka: - I-Yoga leggings, amahembe we-compression, ibhola lezemidlalo, i-singlet, imikhono.
Izesekeli: - Izimpumputhe Zomuthi, Izigcawu Zomlomo, Izigqoko Zemikhumbi, amabhande e-Martial arts, ukuvikelwa okunamandla kanye nezinkinobho zokukhiya.
Uma unemibuzo mayelana nomkhakha wethu wamanje wamikhiqizo noma unemikhiqizo emisha ongathanda ukuyihlakulela, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi. Njengoba sinikezwe ithuba sizozama konke esingakwenza ukuze sithole ibhizinisi lakho ..
Ukuze uthole olunye ulwazi sicela uvakashele iwebhusayithi yethu http://www.boxing-products.com